Wacom dia mandefa Bamboo Paper amin'ny Windows 10 | Famoronana an-tserasera
Taratasy volotsangana dia a fampiharana finday izay ahafahantsika miditra amina andian-tombony toy ny kahie amin'ny fomba ampifanarahana ary afaka mizara amin'ireo mpampiasa hafa izahay hizara naoty na hamoronana asa famoronana toa ny tetikasa na izay mety ho tabilao haingana.
Ankehitriny dia Wacom no tsy te-hanana sehatra hajanona raha tsy misy ny fampiharana famoronana lehibe toy ny Bamboo Paper rehefa natomboka izy io amin'ny Windows 10 ho fampiharana manerantany ka azo ampiasaina amin'ny Windows Phone na PC. Fahatongavana iray manontolo izay manome kalitao avo kokoa amin'ny Windows Store, tranokala virtoaly ahafahanao mividy fampiharana sy lalao video hahafahanao miditra amin'ireo karazana rindrambaiko rehetra amin'ireo sehatra ireo.
Ka manomboka izao dia izy ireo mpampiasa maherin'ny 110 tapitrisa izany dia afaka miditra amin'ny Bamboo Paper ao amin'ny Windows 10 sy amin'ny kinova findainy. Fampiharana iray izay manana endrika maromaro toa ny fahaizana manao sary fohy, manao sary, mandoko ireo naoty efa voasoratra na manaova tanana ny diarinao manokana.
Ny iray amin'ireo toetrany lehibe indrindra dia ny fahafahany manome hery ny mpampiasa mizara kahie amin'ny olona mifandray ka izy tenany mihitsy no afaka manova azy sy mampiasa azy hiasa amin'ny fiaraha-miasa. Amin'io lafiny io dia mitovy amin'ny OneNote an'ny Microsoft sy ny sasany hafa izy, na dia manana ny fanekena aza ny Bamboo Paper izay midika hoe avy any Wacom.
Eo no idiran'ny teknolojia WILL, izay azo ampiasaina hatramin'ny takelaka Windows ka hatramin'ny fanoratana mailaka sy voajanahary kokoa izany dia manakaiky izay azo azo avy amin'ny pensilihazo mandritra ny androm-piainany. Raha atao default dia manana borosy enina isan-karazany izy hamoronana naoty sy hanaovana karazan-tsary rehetra, fa amin'ny fananana micropayments dia afaka mividy borosy sy taratasy bebe kokoa miaraka amina endrika am-boalohany ianao izay mamadika ny kahie ho zavatra tena manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Wacom dia mitondra Bamboo Paper mankany Windows 10 ho fampiharana manerantany